Wararka Maanta: Arbaco, Jan 19, 2022-Diyaarad qaas ah oo siday Jenaraal Xuud iyo Jenaraal Biixi oo Muqdisho kasoo degtay
Labada Jenaraal ayaa markey soo caga dhigteen garoonka Aadan Cadde, waxaa halkaas kusoo dhaweeyay oo ay Salaan ka qaateen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Jenaraal Abuukar Xuud ayaa warbaahinta kula hadlay qeybta VIP-da garoonka Aadan Cadde ayaa sheegay in u jeedada uu Muqdisho u yimid ay tahay inuu la kulmo madaxweynaha mudo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, islamarkaana ay ka go'an tahay hadafkiisa ahaa raadinta xaqa ka maqan reer Hiiraan.
"Waxaan Muqdisho u imid inaan tanaasul u sameeyo dowladda Fedaraalka, mana jirin wax wadahadal ah oo ina dhexmaray Hirshabeelle waxaana xamar u imid sidii xaqa inaga maqan aan ugala xaajoon lahaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya, waxaana reer Hiiraan u sheegaya in qorshaheygii raadinta xaqa inaga maqan uu wali sidiisii yahay oo aan meelba u gali doono sidii loo heli lahaa xaqa inaga maqan" ayuu yiri Jenaraal Xuud.
Taliyaha ciidanka Lugta Maxamed Tahliil oo dhankiisa warbaahinta si kooban ula hadlay ayaa sheegay inuu u mahadcelinayo dhamaan intii ka qeyb qaadatay in wadahdal lagu dhameeyo wax walba, isagoo gaar ah ugu mahadceliyay Jenaraal Xuud iyo Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in Jenaraal Xuud uu si toos ah ula kulmo markii ugu horeysay madaxweyne Farmaajo tan iyo waxii ka dambeeyay dhismahii labaad ee Hirshabeelle oo uu Abuukar Xuud ku dhawaaqay in Hirshabeelle aysan aheyn maamul laga aqoonsan yahay gobolka Hiiraan oo haatan laga joogo 1 sano.